“Way adag tahay inaan horyaalka ku guuleysanno” – Pique – Gool FM
“Way adag tahay inaan horyaalka ku guuleysanno” – Pique
(Barcelona) 20 Juun 2020. Difaaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa quus ka taagan rajada kooxdiisa ay ugu guuleysan karto horyaalka La Liga kaddib barbarrihii goolal la’aanta ahaa ee ay xalay la galeen Sevilla.
Real Madrid ayaa heysata fursad ay ku qaban karaan hoggaanka horyaalka dalka Spain haddii ay habeenka Axadda garaacaan kooxda Real Sociedad oo ay la ciyaari doonaan.
“Waxay ila tahay inay adkaan doonto ku guuleysiga horyaalka” ayuu yiri Pique oo ku sugnaa garoonka kooxda Sevilla ee Ramon Sanchez-Pizjuan.
“Waxaan isku dayaynaa inaan sameyno wax walba oo macquul ah, balse uma maleynayo inay iyagu [Real Madrid] dhibco lumin doonaan.
“Hoggaanka gacanteenna kuma sii jiri doono, waayo way adag tahay inay Real Madrid qasaariso dhibco” ayuu yiri difaaca Barca.
Barcelona ayaa kulankii xalay la timid qaab ciyaareed xoogan, waxayna sidoo kale daqiiqadihii ugu dambeeyay ay sameeyeen weerarro is daba joog ah oo ay gool ku dhalin kareen, balse Gerard Pique ayaa aaminsan inay iyagu qaadanayaan masuuliyadda ah inay dhibco lumiso kooxdooda.
Horyaalka La Liga ayaa xiiso gaar ah leh xilli ciyaareedkan, maadaama kooxaha Barca iyo Real Madrid ay si adag ugu loollamayaan hanashada horyaalka.
Blaugrana ayaa dhiggeeda Los Blancos ka sarreysa saddex buundo inkastoo kooxda Zinedine Zidane uu u harsan yahay kulan ay Axadda ciyaari doonaan.
Haddii Los Blancos ay kulankaas guuleysato waxay hoggaanka kula wareegi doontaa xeerka is aragga fool-ka-foolka ah, maadaama kulammadii ay wada ciyaareen ay Real Madrid heshay afar dhibcood, halka Barca ay heshay hal dhibic.
Macallin Frank Lampard oo ka warbixiyay xaaladda N'Golo Kante iyo mustaqbalkiisa... (Miyuu taam u yahay kulanka Aston Villa?)